Izany no sekoly taloha-eoropeanina haja avo tafo, Brasserie Fittings, rindrina fitaratra, ary ireo mpiandry mitafy ara-dalàna.
A Surf-ara-tsindrimandry fivarotana kafe ao Paris no azonao rehefa misy Aussie sy Frenchie manomboka ny fivarotana kafe, ao amin'ny iray amin'ireo tanàna malaza amin'ny kolontsaina kafe malaza eto amin'izao tontolo izao. Izany no mahatonga azy eo amin'ny avo amin'ny lisitry ny fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa.
Noho ny orinasa toy ny Mok, Brussels dia mahazo ny toerany amin'ireo fivarotana kafe tsara indrindra amin'ny sari-tanin'i Eropa.
Izy ireo ihany no mamono ny tsaramaso kafe izay midika hoe manana kalitao avo indrindra izy ireo.
Izany no antsoina hoe ny teatra ny kafe. Tsy tena manana toerana eo amin'ny fivarotana kafe tsara indrindra any Eoropa lisitra. Io toerana dia fankalazana ny fomba amam-panao sy ny kafe nanandrana manana efitrano misy fanjakana-avy-ny-kanto Roastery. Eritrereto Willy Wonka mihaona kafe.
In Edinburgh, ny Brew Lab dia mazàna ary iray amin'ireo fivarotana kafe tsara indrindra any Eropa.
Ny mampiavaka an'i Brew Lab dia misy olona mihomehy mafy eo am-baravarany. Ny kafe sakafo dia fanekena ny fitiavany.
Izany dia manasongadina miodina efatra afa-tsy fiaviany Kafe. Roa no brewed teo amin'ny fisotroana labiera roa, ary ny anankiray teo amin'ny fisotroana kafe expresso. Coffee tsiroaroa deliciously amin'ny mofomamy na mofomamy, izay ny labiera Lab dia tsy fahampian'ny.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Best trano fisotroana kafe fa The Best Coffee In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)